Liverpool Oo Mudnaanta Koowaad Ka Dhigeysa Saxiixa Pedri Ee Barcelona
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLiverpool oo mudnaanta koowaad ka dhigeysa saxiixa Pedri ee Barcelona
June 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Liverpool ayaabartilmaameedkeeda 1-aad ka dhigatay xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ee Pedri marka la gaadho suuqa xagaaga.
18 jirkaan ayaa ka soo muuqday ololihiisii ​​ugu horeysay ee Camp Nou markii ugu dambeysay, isagoo 51 kulan u saftay tartamada oo dhan Barca.
Saamiyada Pedri ayaa kaliya sii kici doonta iyada oo la filayo in uu boos joogto ah ka helo Spain xagaagan dib u dhaca ku yimid tartankii Euro 2020.
Barca ayaa la rumeysan yahay inay ka dhigtay 18 jirkaan mid ka mid ah afar ciyaaryahan oo loo arko inay yihiin “lama taabtaan” xilli hubanti la’aan kooxda ee xidigaha ay jirto.
Si kastaba ha noqotee, Pedri ayaa qandaraaskiisa lagu burburin karaa 70 milyan ginni, taasoo la micno ah in go’aan kasta oo ka soo baxa gacanta Barca haddii dalab la soo bandhigo.
Shabakada Isbaanishka ee Mundo Deportivo ayaa soo jeedineysa in Liverpool ay miisaameyso inay u dhaqaaqdo da ‘yarkaan khadka dhexe, inkastoo lacagtaas badan ay ka baxsan tahay qiimaha ay ku kala iibsan karaan.
Reds ayaa durbaba £ 36m kala soo baxday si ay uga soo qaadato Ibrahima Konate kooxda RB Leipzig ka hor xilli ciyaareedka 2021-22.